BitGo si ay u bartaan shirkad trust si buuxda u nidaamsan oo leh in ka badan $ 12b in hantida
BitGo, hoggaamiye ee xal digital ammaanka lacagta ee maalgashadayaasha hay'adaha, ku dhawaaqday in ay uu la galay heshiis sax ah si ay u bartaan Company Trust Kingdom, South Dakota a – Shirkadda buuxda u nidaamsan trust ka badan $12 billion in hantida. macaamil ganacsi ayaa wali ku xiran yahay shuruudaha xiritaanka dhaqameedka iyo ansixinta sharciyeed.
"Suuqyada maaliyadda Global u xiisooday, qurbaan-ilaa dhamaadkii xal labada technology ee ku sugan lacagaha digital iyo sidoo kale sharci iyo waafaqsanaanta gacanta ku lagama maarmaan ah in ay dadka dhexgalaan galay xilal dhaqaale caadiga ah"
Kingdom Trust oo la kulmay dhammaan shuruudaha lagu dabaqi karo ee xeerka Dakhliga Gudaha 408 si ay ugu adeegaan sida haye aqoon sida ku qeexan Xeerka TALIYAYAAL Investment ee 1940. Adeegyada haya ay bixiyaan shirkadaha trust ah, garab software ilaalinta ammaanka lacagta digital BitGo ee, ka dhigi doonaa shirkadaha isku daro kaliya xidhmooyin buuxa, at bixiyaha qiyaasta ilaalinta ayaad jeceshahay iyo online maalgelinta lacagta digital qabtay by maal-hay'adeed.
“BitGo iyo Kingdom dhisayaan waxyaabaha mustaqbalka – guursanayeen technology cusub la ammaanka iyo kontaroolada oo dhan maal u baahan.”
Kazakhstan tijaabooyin bixinta ganaaxyada gaadiidka la Seeraar
Kazakhstan waxaa taas oo suurto gal ah in ay bixiyaan ganaaxyada gaadiidka la cryptocurrency. The OKauto.kz codsiga iyo adeegga mobile hore loo si guul ah tijaabiyey by mid ka mid ah abuuray ee codsiga – Ali Shaykhislam. Si kastaba ha ahaatee, qorayaal adeegga xoogga saaraan in shaqo cusub weli waa uu socdaa in hab imtixaanka.
The abuuray oo ka mid ah xaqiiqsadeen in suurtagalnimada ee bixinta ganaax dowladda xadgudub ku ah sharciyada waddooyinka ee cryptocurrency ee Seeraar.
Tani waa app a free kaas oo bixiya adeeg xaqiijinta iyo farriimaha ganaax soo saaray, iyo waxyaabo kale.
Waa xusid mudan in aysan jirin xaalad rasmi ah cryptocurrencies in Kazakhstan, iyagu ma waxaa loo arkaa lacag toona Dhaqaale.
biilka cryptocurrency Ruush soo jeediyay
Wasaaradda Ruush The Maaliyadda daabacay biil “On Digital Hantida Financial”, taas oo loogu talagalay in lagu sharciyeeyo cryptocurrencies ee Russia.
Wasaaradda Maaliyadda loola jeedaa hantida dhaqaale digital sida “hantida qaab elektaroonik ah, abuuray isticmaalaya sirta (cryptographic) ka dhigan tahay.”
Waxaad ku bedelan kartaa calaamadihii for cryptocurrency kale ama rubles oo kaliya iyada oo loo marayo is-weydaarsiga gaar ah – “ka shaqeeya sarrifka hantida dhaqaale digital”.
Kaliya unug sharci ka diiwaan gashan Russia, oo logu sharciyada No. 39-FZ “On suuqa securities” ama Maya. 325-FZ “On Xirfado abaabulay” noqon karaan shaqaale sida.
Qaabka loo furitaanka iyo dayactirka xisaabaadka waa in la aasaasay by Bangiga Dhexe.
jaangooyaha ayaa rabta in ay iibsato kaliya calaamadihii in shirkadaha isticmaali dhaqaale loogu ururinayey rubles, digtay Wasaaradda Maaliyadda.
Wasaaraddu waxa ay aaminsan tahay in ay tahay wax aan macquul aheyn in ay mamnuucaan iibka caadiga ah ee cryptocurrency, maxaa yeelay, doonista ganacsiga sharci-darrada ah haddii kale “biiro” suuqa this.
Sidoo kale dokumentigan waxaa jira qeexidda heshiisyada smart iyo macdanta, oo waxaa loo arkaa dhaqdhaqaaqa ganacsiyada ay la abuuro ama qiimaynta cryptocurrency lagu bedelayo magdhow. Maxaa canshuurta loo qaado doonaa hawlaha macdan qodayaasha ah, aan la cayimay.
Haddii dukumintiga maraa saddex akhrinayaa in Duma Gobolka, iyo sidoo kale ka helo ogolaansho Golaha Federation iyo saxiixa madaxweynaha Ruushka, waxaa la xoojin doonaa 90 maalmood ka dib markii ay daabacaadan rasmi ah. Sharciga ayaa laga yaabaa in wax laga baddalo inta lagu jiro doodaha ee Baarlamaanka.
Maxkamadda ansixiyay Mt. G...
Post Previous:xisaabyahan ah ayaa loo xisaabiyaa qiimaha Seeraar waayo, 2018
Post Next:Chainalysis – Shirkadda wax baabbi'inayay ku Seeraar magaciisa ku